Xiao Hongshu သည် Ghostwriter အေဂျင်စီ ၄ ခုအား ယွမ် ၁၀ သန်း ဖြင့် တရားစွဲဆို ခဲ့သည် – Pandaily
Jan 19, 2022, 19:35ညနေ 2022/01/19 23:19:52 Pandaily
ဗုဒ္ဓဟူး နေ့တွင် တရုတ်၏ ဦး ဆောင် လူနေ မှုပုံစံ စတဲ့ မျှဝေ ခြင်း ပလက်ဖောင်း Xiao Hongshu က ကြေငြာ ခဲ့သည်Multi-channel Network (MCN) အဖွဲ့အစည်း ၄ ခုကို တရားဝင် တရားစွဲဆိုဤ အဖွဲ့အစည်း များသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း များနှင့် ဘလော့ ဂါ များအား မှားယွင်းသော မြှင့်တင် မှုများပြုလုပ် ရန်နှင့် ပလက် ဖော င်း၏ အကြောင်းအရာ ဂေဟ ဗေဒ နှင့် ဂုဏ် သတင်း ကိုပျက်စီး စေရန် “ အကောင့် အမျိုးမျိုး သုံး၍ အကြောင်းအရာ များ ပေးပို့ ခြင်း” စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်ပတ်သက် သည်ဟု သံသယ ရှိသည်။
ဤ အကြောင်း ကြောင့် Xiaohongshu သည် အေဂျင်စီ လေး ခုသည် မှားယွင်းသော မြှင့်တင်ရေး အရောင်းအ ၀ ယ် များကို ချက်ချင်း ရပ်တန့် ရန်နှင့် Xiaohongshu အား စီးပွားရေး ဆုံးရှုံး မှုအတွက် ယွမ် ၁၀ သန်း (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁. ၅၇ သန်း) လျော်ကြေးပေး ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။
“ ကွဲပြားခြားနားသော အကောင့် များအတွက် Ghostwriting content” ၏ မီးခိုးရောင် စျေးကွက် များသောအားဖြင့် အောက်ပါ အပြုအမူ ကိုရည်ညွှန်း သည်: အမှတ်တံဆိပ် သို့မဟုတ် တတိယ ပါတီ ကြားခံ တစ် ဦး အမှတ်တံဆိပ် လိုအပ်ချက် အချို့ ကိုယူ ။ တတိယ ပါတီ ပလက်ဖောင်း မှ Ghostwriting နှင့် အကြောင်းအရာ လွှတ်ပေးရန် အမိန့်ပေး ။ ထို့နောက် သူတို့သည် Xiaohongshu, Yinyin, Popular Review စသည့် ပလက်ဖောင်း များပေါ်တွင် အကြောင်းအရာများကို ထုတ်လုပ်ရန် နှင့် ဖြန့်ချိ ရန်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် ၀. ၁၀၀၀ ယွမ် မှ ၀ င်ငွေ ဖြင့် ၀ န်ထမ်း အမြောက်အများကို စုဆောင်း လိမ့်မည်။
ထို့အပြင် Little Red Book သည် ၂၀ ၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၉ ရက်နေ့တွင် မှားယွင်းသော အကြံပြု ချက်များအပေါ် တတိယအကြိမ် စစ်ဆင်ရေး ကိုစတင်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည် ကုန်အမှတ်တံဆိပ် ၆၈ ခုနှင့် အော့ ဖ် လိုင်း ကုန်သည် များ ကို၎င်း၏ ပလက်ဖောင်း ၏ပထမ ဦး ဆုံး စကင်ဖတ်စစ်ဆေး မှုတွင် ပိတ်ဆို့ ထားသည်။ တတိယ အႀကိမ္ အေရးယူ မႈတြင္ ေအာ့ ဖ္ လိုင္း ကုန္သည္ ေျခာက္ ဦးႏွင့္ အမွတ္တံဆိပ္ ခုနစ္ ခုကို ပိတ္ပင္ ခဲ့သည္။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Xiao Hongshu သည်တရုတ် လူငယ် များ၏ ဘဝ ပုံစံ အတွက် လှုံ့ဆော်မှု တစ်ခုဖြစ်ပြီး စီးပွားရေး အောင် မြ င်မှုနှင့် ရပ်ရွာ လူထု ကြားတွင် ကောင်းမွန်သော လမ်းကြောင်း တစ်ခု ဖြစ်သည်
Little Red Book သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက်တွင် ပထမဆုံးအကြိမ် နှိမ်နင်း ခြင်း ခံရပြီး ကတည်းက အမှတ်တံဆိပ် ၈၁ ခုနှင့် အော့ ဖ် လိုင်း ကုန်သည် များကို ပိတ်ပင် ထားပြီး မှားယွင်းသော ထောက်ခံချက် ၁၇ ၂၆၀ ၀ နှင့် ပလက်ဖောင်း ချိုးဖောက် မှု အကောင့် ၅၃ ၆၀၀ ကိုပိတ်ဆို့ ခဲ့သည်။